Ifuna ilungelo lokukhipha isisu ingane, 10, eyadlwengulwa | News24
Ifuna ilungelo lokukhipha isisu ingane, 10, eyadlwengulwa
New Delhi – Inkantolo yaseNdiya izothatha isinqumo mayelana nokuthi ngabe ingane yentombazane eneminyaka eyishumi ubudala eyakhulelwa ngemuva kokudlwengulwa kumele yini isikhiphe isisu, kusho amaphoyisa.
Ingane, eyayisala ekhaya uma unina esemsebenzini, ithi yayidlwengulwa nguyise ongayizali, okumanje usezikhindini.
Udaba lokukhulelwa kwayo luvele ngeledlule, kanti ngaleso sikhathi abesedlulile amasonto angu-20 abekiwe ngumthetho ukuba owesifazane akhiphe isisu uma impilo yengane noma eyakhe isengozini.
"Sifake isicelo enkantolo sokuba iyalele ukuhushulwa kwesisulu,” kusho uPankaj Nain, oyisikhulu samaphoyisa eRohtak enyakatho yesifunda iHaryana.
OLUNYE UDABA: Kushone 24 kuwa udonga emshadweni
"Manje konke sekusezandleni zenkantolo,” kusho uNain.
Ezinyangeni zakamuva izinkantolo zaseNdiya zithole izicelo eziningi zabesifazane – okubalwa kubona nabake badlwengulwa – abafuna ukuvunyelwa ukuhushula izisu ngisho esedlulile amasonto angu-20 abekiwe ngokomthetho.
Izishoshovu zithi isikhathi kumele selulwe ngenxa yokuthi izisulu zokudlwengulwa zivame ukungabiki ngokushesha uma zikhulelwe.